Su'aalaha la isweydiiyo - Shijiazhuang Jipeng Import and Export Co., Ltd.
Ku soo dhowow boggayaga
Taageero emayl ah plumbingsales01@sjzmetal-electric.com
Wac Taageer 0086-13833199589
EN877 Tuubooyinka Cirridka Caarada ee Grey
EN877 Gray Cast Iron Fittings
Isku-xirnaanta Birta ee Aan Xabbadda Lahayn & Xirmooyinka Xirmooyinka
ASTM A888 Tuubooyinka Mashiinka Dhabka ee Dabka
ASTM A888 Qalabka Mashiinka Xirmooyinka ee "Iron Iron Fittings & Drains"
EN545 598 Tuubooyinka Dhuuban & Qalabka Iftiinka leh
Daboolka Manhole iyo Xirfadaha, Gully
Qeybaha Kabka Birta ee Aan Birta Laheyn
SU'AALAHA HAD IYO JEER LA ISWAYDIIYO
Maxay yihiin qiimayaashaadu?
Qiimaheena waa la beddeli karaa iyadoo ku xiran sahayda iyo arrimaha kale ee suuqa. Waxaan kuu soo diri doonaa liiska qiimaha cusboonaysiinta ka dib marka shirkaddaadu nala soo xiriirto wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma haysataa tirada ugu yar ee amarrada?
Haa, waxaan u baahan nahay amarrada caalamiga oo dhan inay lahaadaan tirada amarrada ugu yar ee socda. Haddii aad rabto inaad dib u iibiso laakiin aad u tiro yar, waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso bartayada internetka
Ma keeni kartaa dukumintiga la xiriira?
Haa, waxaan bixin karnaa dukumiintiyo badan oo ay ka mid yihiin Shahaadooyinka Falanqaynta / Waxqabadka; Caymis; Asal ahaan, iyo dukumiintiyo kale oo dhoofis ah meeshii looga baahdo.
Waa maxay celceliska waqtiga hogaaminta?
Saamiyada, waqtiga hogaaminta waa ilaa 7 maalmood. Soo-saaris ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-30 maalmood kadib marka la helo lacag-dhigashada. Waqtiyada hogaaminta ayaa dhaqan gala marka (1) aan helno deebaajigaaga, iyo (2) waxaan heysanno ogolaanshahaaga ugu dambeeya alaabadaada. Haddii waqtiyadeena hogaaminta aysan ku shaqeynin waqtigaaga kama dambeysta ah, fadlan ka gudbo shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaanu ku haqabtiro baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Qaababab noocyo ah oo lacag bixinta aad aqbashaa?
Waxaad ku bixin kartaa lacagta koontadayada, Western Union ama PayPal:
30% horay u dhige, 70% dheelitirka dhanka nuqulka B / L.
Waa maxay damaanad qaadka sheyga?
Waxaan damaanad qaadeynaa agabkeenna iyo shaqadeena. Ballan qaadkeennu waa qanacsanaanta alaabadayada. Caymis ama majiro, waa dhaqanka shirkaddayada in wax laga qabto oo la xalliyo dhammaan arrimaha macmiilka si qof walba loogu qanco
Miyaad dammaanad ka qaadaysaa soo-saarista badeecad aamin ah oo aamin ah?
Haa, waxaan had iyo jeer isticmaalnaa xirmooyin dhoofinta tayo sare leh. Waxaan sidoo kale u isticmaalnaa kaydinta khatarta khaaska ah alaabada khatarta ah iyo maraakiibta keydinta qabow ee la xaqiijiyay oo loogu talagalay alaabada xasaasiga ah. Baakadaha khaaska ah iyo shuruudaha xirxirka aan caadiga ahayn waxay ku imaan karaan lacag dheeraad ah.
Sidee ku saabsan khidmadaha dhoofinta?
Qiimaha dhoofinta ayaa kuxiran habka aad dooratay inaad u soo iibsato alaabada. Express Express sida caadiga ah waa tan ugu dhakhsaha badan laakiin sidoo kale habka ugu qaalisan. Xeebta baddu waa xalka ugu wanaagsan ee qiyaasta badan. Sida saxda ah ee qiimaha xamuulka waxaan ku siin karnaa kaliya haddii aan naqaanno faahfaahinta qaddarka, culeyska iyo habka. Fadlan nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah.
MA U BAAHANTAHAY INAAN LA SHAQO?
Shijiazhuang Jipeng Import and Export Co., Ltd.
Dhuumaha SML, qalabka dhejinta iyo nidaamyada isku xidhka ...
Birta dhaantu waa sheyga caadiga ah ee loogu talagalay dal ...
Hawlaha Gaarka ah: Maxay yihiin iyo Goorma ...
Miyaad daryeeshaa deegaanka?
Sifooyinka tuubbada birta
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama qiimeyahankeena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga waxaanan la xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.